Warka 10 09 2016 U Dowlada hoose ee Muqdisho oo amar adag kasoo saartay xoolaha. - Saafi Films Production Somali Films Hindi Af Soomaali Musalsal heeso
Warka 10 09 2016 U Dowlada hoose ee Muqdisho oo amar adag kasoo saartay xoolaha.
DR. Qooto Qooto Part 4 Sheeko taxane ah jilayaal badan.
Faaliyaha Qaranka 10 09 2016 Qosolka jaadkii dowlada mamnuucday & Puntland oo iyadana.
WARKA 21 11 2018 Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo kulan la qaatay madaxweynaha dalka Talyaaniga
Inter-district soccer tournament ends in a pulsating floodlit match in the capital Mogadishu
Two Million Somalis Could Die Of Starvation From Drought, UN Warns
Warka 31 03 2016 Qarax lagu dhamaaday oo uu ka mid ahaa masuul ka tirsan…
WARKA 09 08 2019 Gudoomiye Maxamed Mursal oo soo dhaweyn diiran ka helay jaaliyada Soomaaliyeed…